Global Voices teny Malagasy » Taona Fito Taorian’ny Namonoana Azy, Mbola Tavela ny Lovam-Panantenana Navelan’i Farzad Kamangar, ilay Kiorda Mpampianatra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Mey 2017 5:14 GMT 1	 · Mpanoratra Hamid Yazdan Panah Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fanabeazana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Manamarika ny fahafito taonan'ny namonoana tao anatin'ilay fonja malazan'i Evin an'ilay Kiorda mpampianatra sady mpikatroka Farzad Kamangar ny 9 May. i Kamangar dia nampangaina ho mpikambana ao amin'ilay vondrona Kiorda mpanohitra, PJAK  ary nohelohina ho faty taorian'ny fitsaràna fohy tsy nanaraka ny dingam-pitsaràna tokony ho izy.
Sady mpikatroka i Kamangar no mpampianatra taminà sekoly ambaratonga fototra tany avaratra-andrefan'ilay tanàna Iraniana ao Kamyaran, toerana maha-mpikambana azy ihany koa ao anatin'ny Sendikan'ireo Mpampianatra ao Kiordistàna, ary nanoratra ho anà fanontàna miafina maro samihafa miresaka zon'olombelona. Taorian'ny fisamborana azy, nitondra ho amin'ny fanamelohana avy amin'ireo fikambanana iraisampirenena ireo taratasy ny lahatsoratra avy amin'i Kamangar momba ny fepetra tsy araka ny maha-olona iainana ao am-ponja, isan'ireny fikambanana ireny ny UNICEF sy ny Education International , fikambanana iray izay misolo tena ireo mpampianatra manerana izao tontolo izao. Novonoina izy tamn'ny 9 May 2010, niaraka taminà mpifonja Kiorda telo hafa: Ali Heydarian, Farhad Vakili, ary Shirin Alam-Holi.
Nanohy fombandrazana efa fanao hatry ny elabe ao Iràna i Kamangar amin'ny fanaovana sorona ireo tanora mpikatroka politika efa hatrany amin'ny revolisiona 1979, ary nihoatra lavitra an'ilay Praiminisitra malaza ho demaokraty Mossadegh  izay voaendaka teo amin'ny toerany noho ny fanonganam-panjakana notarihan'ny CIA taminìny 1953, ary ilay revolisionan'ny lalàm-panorenana tamin'ny 1906 . Ny fiainany sy ny fampianarany dia nitovy betsaka tamin'ny an'ilay Iraniana mpanoratra sady mpampianatra, Samad Behrangi . Samy mpampianatra Marksista izy roalahy, izay netsehin'ny fahantrana hitan'ny masony tany ambanivohtr'i Iràna, ary taty aoriana dia lasa lasibatry ny herisetran'ny fitondràna.
Raha tokony ho famintinana ny fiainany, dia avelako ianareo ho ao anatinà tsonga iray avy amin'ny iray tamin'ireo taratasy farany avy aminy, talohan'ny  namonoana azy. Ilay taratasy izay nosoratany ho an'ireo mpiray efitra taminy tao am-ponja ary ny fianakaviany dia mitantara ny taratry ny diany toy ny an'ilay Trondro Mainty Kely avy amin'ny iray amin'ireo tantara malaza indrindra nosoratan'i Behrangi. Ny fandikàna dia tolotra avy amin'ny Bilaogy Anglisy Fandikàna ny Amnesty International:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/11/99539/
 vondrona Kiorda mpanohitra, PJAK: https://en.wikipedia.org/wiki/Kurdistan_Free_Life_Party
 revolisionan'ny lalàm-panorenana tamin'ny 1906: https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Constitutional_Revolution
 iray tamin'ireo taratasy farany avy aminy, talohan'ny: https://www.amnesty.org.uk/blogs/focus-iran/farzad-kamangar-and-4-other-political-prisoners-executed-0